Shir u dhaxeeya Madaxda Maamulada Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada Baydhabo. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorsheynta Koofur Galbeed iyo Midowga Yurub ayaa looga hadli doono Iskaashiga mashruuc ballaaran oo ay maalgelineyso Midowga Yurub oo ah kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha labada dowlad goboleed. Shirkan sidoo kale waxaa ka marneyn oo mudada uu socdo leyskula eegi doonaa sidii wax looga qaban lahaa Fatahaaddaha ku soo noqnoqday marar badan deegaanno ka tirsan labada maamul gaar ahaan gobolka Hiiraan. | RADIOKISMAAYO.COM
Shir u dhaxeeya Madaxda Maamulada Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada Baydhabo. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorsheynta Koofur Galbeed iyo Midowga Yurub ayaa looga hadli doono Iskaashiga mashruuc ballaaran oo ay maalgelineyso Midowga Yurub oo ah kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha labada dowlad goboleed. Shirkan sidoo kale waxaa ka marneyn oo mudada uu socdo leyskula eegi doonaa sidii wax looga qaban lahaa Fatahaaddaha ku soo noqnoqday marar badan deegaanno ka tirsan labada maamul gaar ahaan gobolka Hiiraan.
Shir u dhaxeeya Madaxda Maamulada Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada Baydhabo.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorsheynta Koofur Galbeed iyo Midowga Yurub ayaa looga hadli doono Iskaashiga mashruuc ballaaran oo ay maalgelineyso Midowga Yurub oo ah kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha labada dowlad goboleed.